Home News Aqriso:-Wararkii Ugu Dambeeyay ee Magaalada Baydhabo
Aqriso:-Wararkii Ugu Dambeeyay ee Magaalada Baydhabo
Magaalada Baydhaba ee Xarunta Gobolka Baay ayaa maaankeeda aad loo adkeeyay iyada oo lagu wado in maalinta berri ah ay ka dhacdo doorashada Madaxtinimada Maamulka Koofur Galbeed Soomaaliya.
Ciidamada Booliska ee Federaalka iyo kuwa Maamulka Koofur Galbeed aya alagu arkayaa gudaha Magaalada iyo Koontaroollada laga soo galo,waxaana ay baaritaan ku sameynayaan dadka iyo Gaadiidka.
Xarunta ay berri ka dhaceyso doorashada waxaa sidoo kale la geeyay ciidamo ka shaqeeya amaanka iyo sugidda habka doorashada.
Maalmihii la soo dhaafay Baydhaba waxaa ka taagnaa rabshado ay ku dhinteen dad ku dhow 15 qof kuwaas oo ka dhashay xariggii Khamiistii la soo dhaafay dowladda SOomaaliya u geystay Mukhtaar Robow Cali oo Mloo soo wareejiyay Muqdisho.
Previous articleAl-shabaab oo sheegtay in ay dishay Askar badan oo Itoobiyaan ah!!
Next articleKenya oo la filaayo in ay maanta ka jawaabto dacwada badda Soomaaliya
Isbedelo Aan La Shaacin Oo Lagu Sameeyay Agaasimayaasha Iyo Xoghayayaasha Wasaaradaha...